“ဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့ အစ္စလာမ့် သမီးပျို” | Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
← ::: A True Heart Touching Beautiful Story That Will Bring Tears In your Eyes :’) ::: ♥
5 Reasons On Why Does Allah Test Us. →
Areej El Madhoun ဆိုတဲ့ Gaza (ပါလက်စတိုင်း) ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ ပညာသင်ကြားနေသူ အစ္စလာမ့် ရင်သွေး မိန်းကလေးတစ်ဦး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သင်္ချာစွမ်းရည် ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆု ဆွတ်ခူးပြီး မွတ်စလင်မ် များရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကမ္ဘာသိအောင် ပြခဲ့ပါတယ်။
အခုရက်ပိုင်းမှာ အနောက်တိုင်း မီဒီယာတွေရဲ့ သွာလေဗာန် (သူတို့အခေါ် တာလီဘန်)မုန်းတီးရေး ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့နေရာမှာ အသုံးချခံခဲ့ရတဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးငယ် Malala Yusuf Zain နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သတင်းအမှန်မှန်း မစူးစမ်းဘဲ အနောက်တိုင်း မီဒီယာက Highlight လုပ်ပေး သလောက်သာ ဖတ်ပြီး သွာလေဗာန်တွေက မွတ်စလင်မ်အမျိုးသမီးတွေကို “အစ္စလာမ့်ဥပဒေ – Sharia Law” အရပဲ ပညာသင်ခွင့်မပြုသယောင်နဲ့ အချို့က ဖြစ်ရပ်မှန်ကို သေချာအောင် မစမ်းစစ်ပဲ သွာလေဗာန်ကို အပြစ်တင်သလိုမျိုး သံယောင်လိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘယ်သူက သေနတ်နဲ့ ဘယ်သူ့ကို ပစ်မှန်းလည်းမသိခဲ့သလို ရတဲ့ဒဏ်ရာက ဦးခေါင်းကိုထိတယ်ပြောပေမဲ့ ဓာတ်ပုံမှာက လည်ပင်းရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ ပတ်တီးနဲ့ ပုံပြလိုက် ညာဘက်မှာ ပတ်တီးနဲ့ ပုံပြလိုက် မီဒီယာမှာ ဖွခဲ့ပါတယ်။
ဒါက Malala ကို သေနတ်နှင့် ပစ်သတ်ရန် ကျိုးစားခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ရေးသားထားတဲ့ အနောက် တိုင်း မီဒီယာရဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။
“On9October 2012,aTaliban gunman shot Yousafzai as she rode home onabus after taking an exam in Pakistan’s Swat Valley. The masked gunman shouted “Which one of you is Malala? Speak up, otherwise I will shoot you all”,and, on her being identified, shot at her. She was hit with one bullet, which went through her head, neck, and ended in her shoulder. Two other girls were also wounded in the shooting: Kainat Riaz and Shazia Ramzan,both of whom were stable enough to speak to reporters and provide details of the attack. After the shooting, Yousafzai was airlifted toamilitary hospital in Peshawar , where doctors were forced to begin operating after swelling developed in the left portion of her brain, which had been damaged by the bullet when it passed through her head. Afterathree-hour operation, doctors successfully removed the bullet that had lodged in her shoulder near her spinal cord.”
နောက်ပိုင်းမှာ မီဒီယာမှာ မထင်မရှားပဲ ဒါက သွာလေဗာန်ဘက်က အဖြေလို့ ပြောပြန်ပါတယ်။
The Taliban later seemed to be qualifying their criticism, saying “We did not attack her for raising voice for education. We targeted her for opposing mujahideen and their war”
နေ့စဉ်နှင့်အမျှ Malala လိုအရွယ် မွတ်စ်လင်မ် ကလေးသူငယ်များ အမေရိကန်တို့၏ Drones
များေ ကြာင့် သေဆုံးနေကြရသည်မှာ ယခုအခါ သောင်းဂဏန်းမှ သိန်းဂဏန်းထိ ရှိလာနေပေမဲ့လည်း မီဒီယာမှာ ထုတ်ပြီး ဘယ်သူမျှ စာနာကြောင်း မပြခဲ့ပါဘူး။
အစ္စလာမ်ဘာသာက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပညာသင်ကြားရေးကို မပိတ်ပင်ထားသည်သာမက အားပေး ထားတဲ့ ဘာသာပါ။ ဒါပေမဲ့ အသက်အရွယ် အလိုက် ထိန်းသိမ်းရမဲ့ စည်းကမ်း နည်းလမ်းတွေက မလွဲမသွေလိုက်နာ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ လိင်မှုကိစ္စတွေ ပညာသင်စဉ် ကလေးသာသာ အရွယ်ကတည်းက ကျူးလွန်နေကျတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ ကျင့်သုံးနေကြတဲ့ အနောက်တိုင်းက ပညာ သင်ကြားရေး လွတ်လပ်ခွင့်မျိုးတော့ အစ္စလာမ်ဘာသာက တားမြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး လွတ်လပ်စွာ ရောနှောနေထိုင်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရလဒ်ဟာ ဒီနေ့ အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စု တစ်နိုင်ငံထဲကို လေ့လာကြည့်ပါ။ ၁၉၉၀ခုနှစ်က FBI အစီရင်ခံစာမှာ နေ့စဉ် ပျမ်းမျှ မုဒိမ်းမှု ၁၇၅၆ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ သူတို့ ယဉ်ကျေးမှုမှာ အမျိုးသားတစ်ယောက် အိမ်ထောင်မပြုသေးသည်ဖြစ်စေ၊ အိမ်ထောင်ရှိသည်ဖြစ်စေ မိမိနှစ်သက်တဲ့ အမျိုးသမီး(များ) နှင့် တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံမှု (Affair) ရှိတာ ပြဿနာ မဟုတ်ပေမဲ့ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး ဆိုပြီး လည်ချောင်းသွေးယိုမတတ် အော်ဟစ်နေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝကို အညွန့်ချိုးပြီး ယောင်္ကျင်္ားတွေရဲ့ ရမ္မက်ဆန္ဒကို ချိန်ခါနေရာမရွေး ဖြည့်ဆည်းပေးခိုင်းနေတဲ့ ညစ်ညမ်း လှတဲ့ လူမဆန်တဲ့ အသိုင်းအဝန်း ဖန်တီးလာကြတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကြေကွဲစရာ မုဒိမ်းကျင့်ခံ ရပြီး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဆေးကျောင်းသူရဲ့ အဖြစ်က အမိန့်မချရသေးဘူး။ အခုတစ်ခါ အသက် ၇နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦးကို ကျောင်းက အိမ်သာထဲမှာ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ လူ ၁ယောက် မုဒိမ်းကျင့် သွားပြန်ပါတယ်။ တရားခံကတော့ ထုံးစံအတိုင်း မမိသေးပေမဲ့ ကလေးမလေး ဘဝက ရေတိမ်နစ် သွားရှာပါတယ်။
ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေကနေ အမျိုးသမီးတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ အစ္စလာမ်ဘာသာက အမျိုးသမီးတွေကို လုံခြုံစွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အမျိုးသမီး သီးသန့်သာ တက်ရောက် သင်ကြားနိုင်တဲ့ ကျောင်းတွေမှာ ပညာ သင်ကြားကြရန် စည်းကမ်းချက် ချမှတ်ပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မီဒီယာကို မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်တတ်ပါစေ။